विहीबार, माघ १६, २०७६
अन्तर्वार्ता/विचार विहीबार, चैत ७, २०७५
प्रदेश–२, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–३ ले चीनबाट उन्नत गाई ल्याउन गरेको सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी भन्छन्, “प्रदेश सरकारको निर्णयले किसान विस्थापित हुन्छन्।”
बाबुराम अधिकारी ।
चीनबाट उन्नत नश्लका गाई ल्याउने प्रदेश सरकारहरुको निर्णयप्रति तपाईंहरुको आपत्ति किन ?
अहिले नै उत्पादन भइरहेको दूध सबै बिक्री हुन नसक्दा बेलाबेला ‘मिल्क होली डे’ हुने गरेको छ । अर्कोतिर निश्चित गाई अट्ने किसानका गोठमा बाच्छीको व्यवस्थापन गर्न धौ–धौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा थप गाई ल्याउँदा किसान विस्थापित हुन्छन् ।
चीनबाट गाई ल्याउँदा किसान कसरी विस्थापित हुन्छन् ?
कार्यविधिमा चीनबाट आयात गरिएका गाई किसानलाई वितरण गरिने उल्लेख छैन, ठूला फार्महरुलाई दिने भनिएको छ । सरकारको अनुदान र सहयोगमा ठूला फार्महरुले धेरै परिमाणमा दूध उत्पादन गर्दा साना किसानको दूध खेर जान्छ । दूध नबिकेपछि किसानहरु आफ्नो पेशाबाट विस्थापित हुन्छन् ।
अहिले उत्पादन र बजारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले वार्षिक दूध उत्पादन २० लाख टन छ । त्यसमध्ये ७ लाख टन दूध दुई हजार सहकारीले संकलन गरेर विभिन्न उद्योगमा पठाउँछन् । सहकारीमा आबद्ध किसानको संख्या पाँच लाख छ । त्यसैगरी ८ लाख टन दूध अनौपचारिक क्षेत्र (घर घरमा वितरण) मा बिक्री हुन्छ । बाँकी ५ लाख टनमध्ये केही भौतिक पूर्वाधारको अभावमा बजारसम्म आइपुग्दैन, बाँकी घरमै खपत हुन्छ ।
उत्पादन धेरै हुँदा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पाउने र निकासीको सम्भावना पनि हुँदैन र ?
अहिलेको बजार मूल्यबाट नै किसानलाई लागत उठाउन धौ–धौ छ । किसानले घाटा खाएर उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पाउनुपर्ने भन्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । विदेश निकासीको त सम्भावना नै छैन । चीन र भारतमा उनीहरुकै उत्पादन प्रशस्त छ । फेरि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योग हामीकहाँ छैनन् ।
अहिले किसानका समस्या के छन् ?
अनुत्पादक पशुको समस्या छ । उन्नत गाईबाट जन्मिएका बाच्छा प्रयोगमा आउँदैनन् । त्यसकारण बाहिरबाट माउ गाई ल्याउनु भन्दा बाच्छी मात्र जन्माउने सिमेन ल्याएर किसानलाई वितरण गर्नुपर्दछ । सरकारले किसानको उत्पादन बजारमा निर्धक्कसँग बेच्न सक्ने अवस्थाका साथै सहज ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।